Inrico T320 4G / Wifi (एन्ड्रोइड अनलक) - नेटवर्क रेडियो
घर / रेडियो / नेटवर्क रेडियो / Inrico T320 4G / Wifi (एन्ड्रोइड अनलक)
यस संस्करणको शुद्ध Android छ। प्रतियोगिताबाट सावधान हुनुहोस् जसले फर्मवेयर संस्करणहरू बेच्छ जसले प्लेस्टोरबाट अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न अनुमति दिँदैन।
अन्य जाँच गर्नुहोस् प्रत्यक्ष च्यानलहरू। यो रेडियो Zello पूर्व स्थापित साथ जहाज हुनेछ।
यदि तपाईंलाई ब्यापारका लागि यो रेडियो चाहिन्छ भने, तपाईंले यसको प्रयोग गर्न विचार गर्नुपर्छ Zello कार्य ($१.२० / yr बाट) वा PTT4U ($ .59.00 .XNUMX.०० / वर्षबाट)
तपाईको सेलुलर ब्यान्ड चयन गर्नुहोस् *
ब्याट्री (अतिरिक्त) ($49)
सामरिक रेडियो पाउच ($49)
डेस्कटप चार्जर ($49)
एन्टेना (अतिरिक्त) ($29)
बेल्ट क्लिप (अतिरिक्त) ($9)
USB चार्जर (अतिरिक्त) ($14)
ब्लुटुथ मूल माइक्रोफोन ($79)
Inrico T320 4G / Wifi (एन्ड्रोइड अनलक) मात्रा
श्रेणी: नेटवर्क रेडियो
यस नेटवर्क रेडियो पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेटवर्क (IRN) र नयाँ संग एन्ड्रोइडको लागि Echolink.
के यो अझै हाम्राडियो छ? यो पढ्नुहोस् लेख.
तपाईं दुई तर्फी रेडियो खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईंले भर्खरै उत्तम रेडियो पसल फेला पार्नुभयो!
के हुन्छ यदि तपाईं एक गर्न सक्नुहुन्छ वाकी टाकी अनुप्रयोग तपाईको फोनमा? हामी तपाईंलाई अहिलेसम्म बनाएको सब भन्दा राम्रो वाकी टाकी अनुप्रयोगको परिचय दिन्छौं: जेलो एन्ड्रोइड, आईफोन, आईओएसको लागि वाकी टाकी अनुप्रयोग हो र त्यहाँ पीसीको लागि जेलो पनि छ।
यस रेडियोजस्तो स्मार्टफोनसँग एउटा PTT छ जसले ट्रान्समिटरको कुञ्जी गर्दछ। जहाँसम्म तपाईंसँग डेटाप्लान वा वाइफाइ जडान छ, तब तपाईं आफैले यो दुई तरिका वाकी टाकी अनुप्रयोग विश्वव्यापी दायराको साथ।
पहिलो, Zello अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसो भए तपाईको मात्र थिच्नुहोस् zello PTT बटन र तपाईं सुन्नुहुनेछ!
तपाईंसँग १-देखि -१ निजी संचार, वा निजी-जेलो च्यानलमा १-देखि-धेरै संचार हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै सार्वजनिक zello च्यानलहरू, बिभिन्न उद्देश्यका साथ, विश्वभरि छन्।
केहि हामराडियो आरएफ नेटवर्कहरू ज़ेलो निजी च्यानलहरूमा जडित छन्। त्यस्तासँग, यदि तपाईं इजाजतपत्र हेम हुनुहुन्छ भने, तब तपाईं Zello सँग अनलाइन रहन सक्नुहुनेछ र तपाईंको ह्याम साथीहरूसँग QSO पाउनुहुनेछ। विश्वव्यापी रूपमा त्यहाँ धेरै zellos छन्। के तपाईं एक बन्न चाहनुहुन्छ? 🙂
सञ्चालन प्रणाली Android 7.0
प्लेटफर्म MTK 6737WM
राम १२० जी + २०० जी
विस्तारित मेमोरी GB२ जीबी सम्म वैकल्पिक
स्क्रीन टीपी प्रदर्शन G + F बहु स्पर्श
ब्याट्री क्षमता 3500mAh पोलीमर
क्यामेरा फ्रन्ट क्यामेरा २.० एमपी ， पछाडि क्यामेरा .2.0.० एमपी ， स्वचालित फोकस
अतिरिक्त समय 80०००० भन्दा बढी घण्टा
स्पिकर + माइक 32 व्यास वक्ता
GPS + कम्पास हो
WIFI ， BT हो
माइक्रो PPIN मिति केबल
MP3 / MP4 समर्थन गर्दै
प्रत्येक प्याकेज समावेश:
१ x T1 फोन रेडियो
1 एक्स ब्याट्री
१ एक्स एन्टेना
1 x USB चार्जर केबल
१ x AC एडेप्टर
१ x बेल्ट क्लिप
१ x उपयोगकर्ता गाइडबेल्ट क्लिप
१ x उपयोगकर्ता गाइड (डोनवलोड यहाँ)
5 लागि समीक्षाएँ Inrico T320 4G / Wifi (एन्ड्रोइड अनलक)
ian (प्रमाणित मालिक) - जनवरी 28, 2018
Inrico T320 एक मजबूत ठोस Ptt इकाई हो, यसको एन्ड्रोइड .7.0.० प्रणालीले zello, IRN, Ptt एप्सहरू चलाउँछ। यसको G जी लाइट जडान र वाइफाइको साथ, त्यसैले तपाईंको मोबाइलमा डाटा सिम वा टिथर प्रयोग गर्नुहोस् र जडान हुनुहोस्।
युनिटहरूको ब्याट्रीको लामो आयु छ र फोनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, Inrico एकाईको रूपमा किटको उत्कृष्ट बिट हो। र म यो सिफारिस गर्दछु।
स्पिकर माइक एस्पेस गर्न अतिरिक्तमा मोबाइल हो,
नेटवर्क रेडियोबाट अर्को महान एकाई।
धन्यवाद साथी हो
CT1EIZ - फेब्रुअरी 8, 2018
मैले सबै नेटवर्क रेडियोहरू प्रयास गरें, विश्वास गर्नुहोस्! यो एक अहिले सम्म मेरो मनपर्ने छ। अब जब PTT बग टीमको बोलावटको लागि निश्चित गरिएको छ, यो रेडियो मेरो दैनिक एकाई हो र म यसलाई मेरो LTE WiFi हटस्पटको रूपमा प्रयोग गर्दछु। म असीमित डाटाप्लानको साथ सिम प्रयोग गर्छु।
क्रेग - फेब्रुअरी 8, 2018
ठिकै म के भन्न सक्छु .. डुआर्टे र नेटवर्क रेडियोहरू अचम्मै भएको छ .. मैले मेरो टी 320२० किनें जुन चाँडै केहि सानो बगहरू नयाँ भए जस्तो पाए, जे भए पनि एक अर्कामा ईमेलको केही जोडी पछि र केही राम्रो सल्लाह डुआर्टे र Inrico जहाँ दिन मा फिक्स मा।
अब मसँग एक सपनाको रूपमा कार्य गर्ने उत्कृष्ट टि 320२० नेटवर्क रेडियो छ र यदि यो डुआर्ट्स महान ग्राहक सेवा र समझका लागि थिएन भने यो हुने थिएन।
म T320 सिफारिश गर्दछ एक अनिवार्य नेटवर्क रेडियो हुनु पर्छ।
धन्यबाद र म तपाईंलाई नेटवर्कमा काम गर्न अगाडि हेर्दछु
जोन G0GCQ - फेब्रुअरी 28, 2018
ठीक छ, युट्युब भिडियोहरू हेरेपछि र क्रिस (मून्रेकरयूके) सँग आइतबार रेनहम रेडियो रैलीमा कुरा गरिसकेपछि, म * अत्यन्तै खुसी छु किनभने मैले T320 खरीद गरें - यो आश्चर्यजनक छ।
यो यति राम्रोसँग निर्मित छ, ब्याट्री ठूलो छ, र अडियो आउट साँच्चै राम्रो छ। म यसबाट धेरै प्रभावित छु। म मुख्यतया IRN प्रयोग गर्दछु तर म पनि Zello संग पंजीकृत छु।
म यस उपकरणको बहुमुखीताको लागि हेर्दै छु, पोर्टेबिलिटी र प्रयोग सजिलोताको मामलामा रेडियोको नक्कल गर्दै।
म निश्चित रूपमा यसलाई डिजिटल कॉममा रुचि राख्ने सबैलाई सिफारिस गर्दछु 🙂
topgun26g (प्रमाणित मालिक) - नोभेम्बर 6, 2018
कस्तो राम्रो रेडियो T320 हो र अत्यधिक सिफारिश गर्दछ यो ब्याट्री जीवन बस यति राम्रो छ र अडियो गुणवत्ता मात्र शीर्ष वर्ग हो र निर्मित गुणवत्ता शीर्ष वर्ग हो।
म केवल यो भन्न चाहन्छु कि नेट वर्क रेडियोबाट मैले प्राप्त गरेको सेवा केवल शीर्ष वर्ग हो जुन मैले लामो समयमा देखेको थिएँ।
त्यहाँ निश्चित नै नेटवर्क रेडियो सिफारिस गर्दछ त्यहाँ सेवा र त्यहाँ उत्पादनको गुणवत्ताको लागि।
तपाईलाई मनपर्न सक्छ ...
रेडियो टोन RT4 4G / LTE वाइफाइ (एन्ड्रोइड अनलक)
रेटेड 4.835बाहिर
$349 भाडोमा हाल
$249 विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्
बिक्री! $999 $799 अब आदेश
Inrico TM-7 Plus 4G / WiFi मोबाइल नेटवर्क रेडियो (एन्ड्रोइड अनलक)
बिक्री! $349 $299 भाडोमा हाल
बिक्री! $499 $449 अब आदेश